ရေးသားသူ = စနေ
Posted by chitthueain at 8:11 AM No comments:
Posted by chitthueain at 8:59 AM No comments:
ငါ့ရဲ့ ရူးသွပ်သွပ် အတွေးတွေနဲ့
မျှော်လင့်မိခဲ့ မင်းရဲ့ ခေါင်းပါးတဲ့ ကြင်နာမှု
နင့်ရဲ့ ကစားစရာ အရုပ်ဘ၀ကို
စော်ကားခံရဖန် များလို့လဲ ထုံထိုင်းနေပါပြီ
မင်းပေးခဲ့ တဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကလဲ
ပေါပျက်ပျက် မင်းရဲ့ အကျင့်ကြောင့်ဆိုတော့
မင်းကို နားလည်ပေးလို့ရခဲ့ပြီ ချစ်သူ..........
Posted by chitthueain at 8:30 AM No comments:
ကျေးငှက်သံ ကျံကျံကြွေးတော့တယ်လေး။ ။
Posted by chitthueain at 4:56 AM No comments:
သင့်ပါတယ် ဗုဒ္ဓဘာသာဟူသည် အဘယ်နည်း … ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမဟူသမျှ ဘုရားရှင်တော်မြတ် ဟောပြောဆုံးမတော်မူအပ်သော
Posted by chitthueain at 9:24 AM No comments:
ကြိုက်နှစ်သက်မိသောစာမူ ၊စာပေများအားဖော်ပြသိမ်းဆည်းသောနေရာလေးတစ်ခုသာ .....
တာရာမင်းဝေဧ။် ဒဿန စကားလုံးများ ...............
အချို့လူများသည် ချိန်ခွင်၏လက်များနှင့်တူ၏။ သူတို့သည် အထက်နှင့်အောက်ကို အပြောင်းအလဲမြန်ကြသည်။ ငါသည်ကား သူတို့ကဲ့သို့မကျင့်။ ခိုင်ကြည်စွာ ရပ...
ရူးသွပ်မှုများစွာ ရင်ခုန်သံထပ်တူညီမျှ ဘဝတစ်သက်တာလက်တွဲဖက် ရင်ခွင်ဦးအချစ်ဆုံးမ ..............။ စမ်းရေအသွင် အေးမြတဲ့မအပြုံး ရယ်သံရေးကပေ...
မနက်ဖြန် – မောင်စိန်ဝင်း ( ပုတီးကုန်း )
ပန်းကလေးတွေလဲ မခြွေပဲ ကြွေတတ်တယ်။ ကြယ်ကလေးတွေလဲ မခြွေပဲ ကြွေတတ်တယ်။ မျှော်လင့်ခြင်းတွေလဲ မခြွေပဲ ကြွေတတ်တယ်။ မခြွေပဲ၊ ကြွေလဲ အနေရဲ...
အကန်း ၁၀ ပါးရေးပြီးတဲ့အခါမှာ သူရဲ့ ကာရန်ခပ်ညီညီဖြစ်တဲ့ အလွမ်း ၁၀ ပါးကို ခပ်ကြောင်ကြောင် ကြံဖန်ရေးရရင်ကောင်းမှာဘဲဆိုပြီး ကျနော် ခံစားမိတဲ့ အ...
အခါတစ်ပါးမှာလ တိုင်းခြားကိုရောက်ခဲ့တယ် ..။ ကိုယ့်ဝတ်စုံ အသာချွတ်ကာပ.. သူ့ ဝတ်စုံ အသာစွပ်လို့ ရယ်.. ၀တ်ဆင်ရတယ်..။ သူ့ စကားကိုလည်း နှုတ်...
“လင်းအာရုဏ် ရွာ အလှ”
ဂိမ္မန်နွေနှောင်း တစ်ဖန်ပြောင်းဘိ မိုးလခါဝယ် ဝဿန် တိမ်တောင် မိုးစက်ပြောင်၍ အာရုဏ်က ကျင်း ရောင်နီလင်းသော် ရွာဦးရယ်ဆီ ဘုန်းတော် ကျေ...
ကမ္ဘာဦးကတည်းက လူမျိုးတိုင်း ဘာသာတိုင်း၌ ၄င်းရို့၏ ဒဏ္ဍာရီ ဆန်သော အထိမ်းအမှတ် သင်္ကေတ ရုပ်ထုများ ရှိခဲ့ကြသည်။ အလားတူပင် ရခိုင် လူမျိုး၌လည်း ဒဏ္ဍာ...
“ပုဂံကျောင်းက ခေါင်းလောင်းသံ” (တင်မိုး)
ပုဂံကျောင်းက ရွှေဒေါင်းတောင်ကျိုး၊ ကလောင်ရိုးဖြင့် ထိုးလိုက်ပါတဲ့ ခေါင်းလောင်းသံ။ ... နေရီချုပ်မိုး၊ ခေါင်းလောင်းထိုးလည်း ညိုးညိုးမညံ၊ တိုး...
ကောင်းကင်ကကျယ်ပြန့် မိုးတိမ်တွေ့ရွှေ့နေရင် ခရီးဘယ်မှာအဆုံးသတ်မလဲ။ သံသရာဘဝတစ်ကွေ့ အတ္တ၊မာန တွေခဝါချချိန် ငါ့ အသက်ကအိုစာနေပြီ။ ...
နေရာသစ်ဆိုပေမဲ့ ရွှေအစစ်ပဲပေးတာပါ အနာဂတ်လှဖို့အတွက် ပစ္စုပ္ပန်ကိုတော့ရင်းရမှာပဲ ဒီခရီးက လေထန်ရင်ထန်မယ် လှိုင်းကြမ်းရင်ကြမ်းမယ် မနေ့က နေ့...
view plainprint? <!-kp-3နည်းပညာ-http://kp3family.blogspot.com-->
ရှာရန် 09/15 - 09/22 (3) 05/19 - 05/26 (1) 11/25 - 12/02 (4) 11/18 - 11/25 (3) 11/11 - 11/18 (4) 11/04 - 11/11 (1) 10/21 - 10/28 (2) 10/14 - 10/21 (2) 09/30 - 10/07 (5) 09/23 - 09/30 (3) 08/26 - 09/02 (4) 08/19 - 08/26 (7) 08/12 - 08/19 (14) 08/05 - 08/12 (8) 07/29 - 08/05 (4) 07/22 - 07/29 (6) 07/15 - 07/22 (18) 07/08 - 07/15 (10) 07/01 - 07/08 (12) 06/03 - 06/10 (14) 05/27 - 06/03 (3) 05/20 - 05/27 (3) 02/19 - 02/26 (1) 01/08 - 01/15 (1) 01/01 - 01/08 (3) 12/18 - 12/25 (2) 03/13 - 03/20 (4) 02/27 - 03/06 (3) 02/20 - 02/27 (6) 02/13 - 02/20 (13) 01/23 - 01/30 (8) 01/16 - 01/23 (3) 01/02 - 01/09 (2)
ဝန်ခံချက် ကိကြီးတစ်ယောက်ဆိမှာ ကူးယူတင်ပြသည် (1)
ဝန်ခံချက် ကိုကိမောင်ဘလော့မှကူးယူးတင်ပါတယ် (1)
ရောက်ရှိလာတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ နောက်လည်း လာလှည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်. Ethereal theme. Theme images by molotovcoketail. Powered by Blogger.